Xiddig u ciyaara PSG oo kooxdiisa ka caawin kara inay lasoo saxiixato Cristiano Ronaldo – Gool FM
(Paris) 11 Abriil 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo warramayaa inuu xagaagan ka tagi karo naadigiisa isagoo haatan xiiso ka helaya kooxda Paris Saint-Germain.
Wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya in kooxda PSG ay dooneyso soo xero gelinta kabtanka Portugal kaasoo lagu soo warramayo inay Bianconeri ku fasixi karto qiimo hoose.
Si kastaba ha ahaatee, doonista kooxda reer France ee Ronaldo ayaa ku xeran mustaqbalka Kylian Mbappe kaasoo qudhiisa aanan siinin kooxdiisa damaanad qaad ku aaddan inuu baaqi kusii ahaanayo.
Sidaas darteed, PSG oo haatan wada xaajood heshiis kordhin ah kula jirta da’yar ka Faransiiska ah ayaa dooneysa inay Ronaldo helaan haddii uu Mbappe ka hayaamo Parc des Princess.
Wada hadallada heshiis kordhinta ah u dhexeeya ku guuleystaha Koobka Adduunka iyo naadiga difaacaneysa Ligue 1 ayaanan u socon sidii la rabay, taasoo suuro gelin karta inuu xiddigan xagaagan ka huleelo caasimadda Faransiiska si uu ugu biiro naadiga lala xiriirinayo ee Real Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, Mbappe ayaa ah furaha PSG ay ku heli karto 36-jirka lagu tilmaamo mashiinka gool dhalinta haddii ay lumiyaan weeraryahankii hore ee AS Monaco.
Mino Raiola oo shardi adag hor dhigaya kooxaha doonaya Erling Haaland... (Hal milyan & hal asbuuc)